သိထားသင့်တဲ့ Huawei Mobile Services အကြောင်း
GMS အစား Huawei ထုတ်ကုန်တွေအတွက် Ecosystem သစ်
Google apps နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ မပါတော့တဲ့ Huawei Mate 30 series ကို မိတ်ဆက်ချိန်မှာ တစ်ခါတည်း ကြေညာလိုက်တာက Huawei Mobile Services (HMS) ပါ။
(၁) Why HMS?
အရင့်အရင်က Google brand တပ်ထားတဲ့ apps တွေနဲ့ cloud-based services တွေပါတဲ့ Google Mobile Services (GMS) ကို Huawei ဖုန်းတွေက လိုင်စင်ခံပြီး သုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ GMS ဟာ Android Open Source Project (AOSP) နဲ့ မသက်ဆိုင်တာကြောင့် အန်းဒရိုက်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အန်းဒရိုက်ထုတ်ကုန်တွေမှာ GMS တွေ တရားဝင် install သွင်းဖို့ Google ဆီက လိုင်စင်ယူရပါတယ်။
ဒီမှာ နည်းနည်း ပြောဖို့လိုတာက GMS အကြောင်းပါ။ GMS မှာ နာမည်ကြီး app package နဲ့ နောက်တိုး additional app package ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ပါပါတယ်။ GMS မှာ လိုင်စင်ရဖို့ဆိုရင် လူသုံးများတဲ့ Google Search ၊ Google Chrome ၊ YouTube နဲ့ Google Play Store တို့ပါတဲ့ popular bundle package ကို preload app တွေအဖြစ် အန်းဒရိုက်ထုတ်ကုန်တွေမှာ preinstall သွင်းဖို့ လိုပါတယ်။
တစ်ခြား နောက်တိုး app package ထဲမှာ Gmail ၊ Google Drive ၊ Google Duo ၊ Google Maps ၊ Google Photos ၊ Google Play Music တို့ ပါပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ကုန်သွယ်ရေး ပိတ်ပင်မှုနဲ့ ကြုံပြီးနောက် Google ဟာ Huawei ကို ပေးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ Huawei ဟာ ပရီမီယံစီးရီးဖြစ်တဲ့ Huawei Mate 30/Mate 30 Pro တို့မှာ Play Store ၊ Gmail ၊ YouTube နဲ့ Maps စတဲ့ Google app တွေ preinstall နဲ့ မလာတော့ပါဘူး။
(၂) What HMS?
နောက်ပိုင်း အခြေအနေဟာ Huawei Mate 30 ဖုန်းသစ်တွေကို GMS အစား ကိုယ်ပိုင် HMS သစ်နဲ့ ပွဲထုတ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Google ရဲ့ GMS နဲ့ စာရင် HMS ဟာ အခုမှ ကကြီးရေ ကအဆင့်မှာပဲ ရှိသေးပြီး ecosystem ထဲလည်း တွင်ကျယ်မှု အတော့်ကို နည်းနေပါတယ်။ HMS ဟာ Huawei ရဲ့ ထုတ်ကုန်​ဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး ချောချောမွေ့မွေ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လည်ပတ်နိုင်စေဖို့ ထုတ်ထားတဲ့ apps နဲ့ services အစုအဝေးကြီးဖြစ်ပါတယ်။
"Huawei Mobile Services ထဲမှာ ဘာတွေ ပါမလဲ ဆိုတော့ Huawei App Gallery တွေ ပါမယ်။ Huawei Music ၊ Huawei Maps ၊ Huawei Email စသည်ဖြင့် customer တွေ အသုံးများတဲ့ services တွေ ပါပါမယ်။ " လို့ Huawei Myanmar Devices ပိုင်း ဈေးကွက်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး မခင်ရတနာဝင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
(၃) HMS apps & services
Huawei ရဲ့ HMS အစုအဝေးကြီးအတွင်းမှာ Huawei AppGallery ၊ Huawei Browser ၊ Huawei Mobile Cloud ၊ Huawei Themes ၊ Huawei Music ၊ Huawei Video ၊ Huawei Reader ၊ Huawei Assistant စတဲ့ apps နဲ့ services တွေ ပါရှိပါတယ်။ HMS apps တွေကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
HMS apps တွေ ဖြစ်တဲ့ Huawei Browser ၊ Huawei Cloud နဲ့ Huawei Themes app တွေကို ​ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမှုပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော် ၊ သန်း ၁၆၀ ကျော်နဲ့ သန်း ၇၀ ကျော်စီ ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Huawei Music ၊ Huawei Video နဲ့ Huawei assistant တို့ကတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမှုပေါင်း သန်း ၁၅၀ ကျော် ၊ သန်း ၁၃၀ ကျော်နဲ့ သန်း ၁၄၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Photo: Huawei Mobile Services MENA / Twitter
Huawei AppGallery ကို ၂၀၁၈ ဧပြီလထဲမှာ Global Launch မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန် AppGallery ကို လစဉ်သုံးစွဲနေသူဟာ သန်း ၃၉၀ နဲ့ အထက်မှာ ရှိနေပါတယ်။ Huawei Mate 30 စီးရီးကတော့ AppGallery Official app preinstall နဲ့ ပထမဆုံး ထွက်လာပါတယ်။ App Gallery ဟာ သုံးစွဲသူတွေကို သူတို့ရဲ့ တည်နေရာနဲ့ နိုင်ငံတွေကို လိုက်ပြီး နာမည်ကြီး Local apps တွေကို ညွှန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Huawei Browser ကတော့ အင်တာနက် browsing နဲ့ ရှာဖွေရေးပိုင်းအတွက် စိတ်ချလုံခြုံပြီး လွယ်လင့်တကူ သုံးနိုင်တဲ့ Mobile Browser တစ်ခုပါ။ အခုလက်ရှိအချိန် ဒီဝန်ဆောင်မှုကို လစဉ်သုံးနေသူ သန်း ၂၀၀ ကျော် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Huawei Mobile Cloud ကတော့ အရေးပါတဲ့ ဓါတ်ပုံ ၊ ဗွီဒီယို နဲ့ ဆက်သွယ်စရာ အချက်အလက်တွေကို စိတ်ချလက်ချ သိမ်းထားနိုင်တဲ့ စနစ်ပါ။ အချက်အလက်တွေကို အဆင်ပြေပြေ နဲ့ စိတ်ချလက်ချ သိမ်းနိုင်စေဖို့ Multi-End Data Synchronization စနစ် ပါရှိပြီး လစဉ် သုံးစွဲနေသူက သန်း ၁၆၀ အထိ ရှိနေပါတယ်။
Huawei Themes ၊ Music နဲ့ Video တို့ကတော့ personalized experience အတွက် Lock screen / themes တွေ ၊ HD အရည်အသွေးမြင့် သီချင်းတွေ ၊ ရုပ်သံဗွီဒီယို contents တွေ အမြောက်အများ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပါ။ Huawei Reader app ဆိုရင် IReader Technology ၊ Dianzhong Technology ၊ Ali Literature နဲ့ China Literature စတဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်ထဲက ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ မိတ်ဘက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းထားတာ ဖြစ်ပြီး Classic ၊ BestSellers စတဲ့ ကဏ္ဍအစုံပါတဲ့ စာအုပ်ပေါင်း ၁ သန်းကျော် ပါဝင်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ personal assistant တစ်ယောက်လို ကူညီပေးနိုင်မယ့် Huawei Assistant ကိုတော့ သတင်းအချက်အလက် ရှာဖွေရေးတွေ ၊ နိုင်ငံ ၈၂ နိုင်ငံက ဘာသာစကား ၃၀ ပါတဲ့ NewsFeed ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ Instant Access လုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
(၄) Developers & HMS Core Capabilities
Huawei Mobile Services နဲ့ apps တွေဟာ Huawei Chips တွေ ၊ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ cloud လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပေါင်းစည်းထားတာပါ။ HMS ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာ HMS Core services တွေ ၊ tools တွေ ၊ IDE ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေအတွက် ပလက်ဖောင်းတွေ စုစည်းထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Huawei က ရတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ သုံးစွဲသူ သန်း ၅၇၀ ရှိနေတဲ့ HMS Ecosystem တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ Huawei နဲ့ ပြင်ပက third-party apps နဲ့ services တွေဟာ developer ပေါင်း ၁.၁ သန်းနဲ့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ HMS Core လုပ်ဆောင်ချက်တွေ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရေးဆွဲမယ့် Developers တွေဟာ HMS Software Development Kit ပေါ် လာပြီး ပူးပေါင်းရမှာပါ။
"Android ရဲ့ Ecosystem က တစ်ခုလုံး mature ဖြစ်ဖို့က အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စောင့်ခဲ့ရတယ်။ အခု Huawei ရဲ့ HMS ကလည်း စနေပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ထင်တယ် အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ စောင့်ရမှာပဲ ။ သို့သော် Huawei ဘက်က HMS ကို ဘယ်လောက်အထိ Focus ထားပြီး Developers တွေရော users တွေကို ဘယ်လောက်အထိ push လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမယ့်သဘော ရှိပါတယ်။" လို့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲ Huawei Mate 30 pro မိတ်ဆက်ပွဲ WorkShop အစီအစဉ်မှာ CarsDB ရဲ့ CEO ကိုဝေယံလင်းက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ် Open Capabilities လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ Intelligent Ecosystem တစ်ခု ဖြစ်ဖို့ developers တွေကို basic services ၉ ခုနဲ့ growth services ၅ ခု ဆိုပြီး စုစုပေါင်း HMS Core services ၁၄ ခု တရားဝင် ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ HMS Ecosystem တီထွင်ကြံဆရေးပရိုဂရမ်အနေနဲ့လည်း Development ပိုင်း ၊ User Growth ပိုင်းနဲ့ Marketing ပိုင်းဆိုပြီး စုစုပေါင်း ၁ ဘီလျံတန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ Huawei ဘက်က ကြေညာထားပါတယ်။